Izicathulo - iBezzia | Bezzia
Enye into esemqoka emfashini ngokungangabazeki izicathulo. Imodeli ephelele ayifani uma ukubaluleka kunganikwanga ku- izicathulo futhi ngaleyo ndlela ziba yingxenye ebaluleke kakhulu yokubukeka kwabesifazane. E-Bezzia, sifuna ukukutshela ngamamodeli ahlukene, izitayela namathrendi kulo mhlaba, futhi ugcine usesikhathini nazo zonke izindaba ezikulo mkhakha.
Izithende, izimbadada, amapulatifomu, izicathulo ze-pointe, Amateku noma ama-wellies wonke aphendula izitayela ezihluke kakhulu kepha lokho okuhlanganiswe kahle kungaba umphelelisi ofanele. Yingakho sizokweluleka ukuthi yiziphi okufanele uzigqoke nokuthi ungazihlanganisa kanjani, ngemibala ehlukene nezitayela.
Ngaphezu kokukwazi ukubona imikhiqizo eminingana bese ukhetha ukuthi iyiphi othanda ukuyigqoka, sincoma amanani ahlukile nezitolo.
I-Ballerinas, isicathulo esikahle sokujaha izinsuku ezinelanga
Por UMaria vazquez kwenza Izinyanga ze-2 .
Abadansi bayindlela enhle ngesikhathi sekhefu ukuqedela izingubo zethu. Njengama-moccasins, awo ...
Ama-loafers, amakhosi ezimpahla zethu ekwindla
Ama-loafers ukukhetha okuhle ngesikhathi se-halft yize kungeyona yodwa. Lezi zicathulo zamadoda ngokuvamile ezenziwe ngesikhumba ...
Izesekeli ezintsha zeMalababa zokwindla
Por UMaria vazquez kwenza Izinyanga ze-3 .
Ngemuva kokubona ukuthi asizange sabelane nawe ngeziphakamiso zikaMalababa ngonyaka odlule, safuna ukukulungisa….
Izitayela zezicathulo zeStradivarius zokuwa nobusika
Por USusana godoy kwenza Izinyanga ze-3 .
Izitayela zezicathulo ekwindla nasebusika sezilapha. Yebo, kuyiqiniso ukuthi kusibiza kakhulu ...
Izicathulo zikaDoly, ezizinzile futhi zenziwa eSpain
Por UMaria vazquez kwenza Izinyanga ze-5 .
UDoly ngumkhiqizo owazalwa ekupheleni kuka-2018 ngenhloso yokwenza ikhwalithi, ukusimama kanye ...
Iziphakamiso zezicathulo ezine ze-vegan zasehlobo
Lapho ihlobo selifikile, sekuyisikhathi sokushintsha iziphakamiso ezisindayo nezifudumele zasebusika ngezikhanya futhi ...
Thola izesekeli ze-SS21 nguBeatriz Furest
Por UMaria vazquez kwenza Izinyanga ze-6 .
Simangele ukuthola ukuthi besingakazabelani nawe iziphakamiso zikaBeatriz Furest. Ifemu eqala ...
Thola ukuqoqwa kwezicathulo zakwaNaguisa ehlobo
Por UMaria vazquez kwenza Izinyanga ze-8 .
Akukona okokuqala ukuthi eBezzia sithole ukuqoqwa kwezicathulo zakwaNaguisa, inkampani yaseSpain e ...
Thola iqoqo elisha lezinsiza zeMango
Por UMaria vazquez kwenza Izinyanga ze-9 .
Umango wethula iqoqo lezesekeli. Futhi akuyona nje noma iyiphi iqoqo; Iqoqo elibanzi kakhulu lezingcezu phakathi ...
Izesekeli ezintsha zeMassimo Dutti zentwasahlobo
Por UMaria vazquez kwenza Izinyanga ze-10 .
Imibala engathathi hlangothi iyona protagonists yeqoqo elisha lezesekeli le-SS21 nguMassimo Dutti. Mhlophe, luhlaza, ukhilimu, mpunga kanye ...
Amabhuthi angu-9 anamasondo wethrekhi ukwakha ukubukeka kwemfashini
Por UMaria vazquez kwenza Unyaka we-1 .
NgoMsombuluko sithole amabhuzu nge-track sole njengomkhuba eBezzia. Amabhuzu anezinhlayiya eziwugqinsi namarabha ...
Izicathulo zabesifazane abanezinyawo ezinkulu
Ungayisusa kanjani imihuzuko ezicathulweni zesikhumba
Amaqhinga okuhlukanisa izicathulo zangempela zikaDkt Martens kuma-knockoffs
Izinto zokwakha ezisetshenziselwa ukwenza izicathulo
Ubukhulu bezicathulo emhlabeni